Wasiirka Arimaha Dibada
1 Abriil 2003 – 1 Luuliyo 2007
7 Janaayo 2001 – 1 Abril 2003
Ansixinta dastuurka ayaa la joojiyay
(1944-03-29) 29 Maarso 1944 ( 77jir)
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (dhashay 29 Maarso 1944) waa Madaxweynaha hadda ee Ghana. Wuxuu xafiiska qabtay ilaa 7 Janaayo 2017. Wuxuu horay u soo noqday Xeer Ilaaliyaha Guud 2001 ilaa 2003 iyo markii uu ahaa Wasiirka Arimaha Dibada 2003 ilaa 2007 intii uu hogaaminayay dowladii Kufuor.
Nana Addo wuxuu markii ugu horreysay isu soo taagay xilka madaxweynenimo 2008 iyo markale 2012, labada jeerba wuxuu ahaa musharraxa xisbiga New Patriotic Party (NPP), laakiin waxaa labada jeerba kaga adkaaday murashaxiinta National Democratic Congress: John Evans Atta Mills ee 2008 iyo John Dramani Mahama sanadkii 2012.
Maxkamadda ugu sarreysa ee Ghana ayaa xaqiijisay guushii John Dramani Mahama. Waxaa loo doortay inuu noqdo murashaxa madaxweynenimada ee Xisbiga New Patriotic Party markii seddexaad doorashada guud ee 2016, markan, wuxuu ka adkaaday John Dramani Mahama wareegii koowaad (isagoo kula guuleystay 53.85% codadkii la dhiibtay), taas oo calaamadeysay markii ugu horreysay doorasho madaxtinimo oo Ghana ah oo musharax mucaaradka ah uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay wareegii koowaad.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nana_Akufo-Addo&oldid=205517"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Sebteembar 2020, marka ee eheed 16:32.